Si loo xalliyo baahida badeecada macaamiisha, shirkadeena waxay samaysay koox gaar ah.Sidaa darteed, waxaan u xaqiijin karnaa macaamiisha:
Waxaan bixinaa adeeg shaqsi-ka-mid ah si aan u qancino iibsadayaasha.
Waxaan uga jawaabi doonaa su'aalaha macaamiisha waqti gaaban gudaheed, si ay macaamiishu u nastaan.
Labadeenaba waxaan saxiixnay heshiis qarsoodi ah si loo xaqiijiyo badbaadada mashruuca.
Tignoolajiyada dallacaadda degdega ah ee bilaa-wireless-ka
PD tignoolajiyada ku dallaca degdega ah
Farsamada gariiradda badan
Tignoolajiyada horumarinta habaynta alaabta isku dhafan
30MM masaafada dheer ee dallacaadda fiilo-la'aanta ee alaabta guriga
Sidee loo qanciyaa macaamiisha?
Kooxda Lantaisi waxay had iyo jeer raacdaa tayada sare, cilad eber, badbaado iyo alaab deegaan saaxiibtinimo leh.Waxaan bixinaa taageero dabacsan, alaab tayo leh, qiimo macquul ah iyo adeegyo tayo sare leh si aan u qancino macaamiisheena.Xaqiijinta macaamiishu waa falsafadayada ganacsi, markaa waxaanu leenahay xakamaynta tayada alaabta aad u adag.Si loo gaaro yoolka ilaalinta tayada, waxaan leenahay waax ilaalin tayo leh oo dhameystiran.
DQE (Injineer Tayada Naqshadeynta)
DQE waxay hubisaa in natiijooyinka naqshadeynta ay buuxiyaan baahida macaamiisha, waxayna si adag u maamushaa falanqaynta, farsamaynta, xukunka, go'aan qaadashada iyo hagaajinta dhammaan habka hawlgalka farsamada ee naqshadeynta.Tusaale ahaan: Xakamaynta tayada hordhaca ah iyo qorsheynta alaabada cusub, DQE waa inay mas'uul ka tahay soosaarka muunada naqshadeynta, qaabka tijaabada, iyo tijaabinta badeecadaha cusub, waana inay samayso tiro badan oo tijaabo ah oo xaqiijin ah si loo xaqiijiyo in alaabada la soo saaray ay buuxisay shuruudaha macaamiisha iyo haddii ay ku qanacsan tahay codsiga, qod oo xalli dhammaan dhibaatooyinka jira habka wax soo saarka.
SQE (Injineer Tayada Alaabta)
SQE waxay maamushaa tayada alaabta ceeriin ee ay bixiyaan alaab-qeybiyeyaasha, laga soo bilaabo kormeerka aan tooska ahayn ilaa kantaroolka firfircoon, waxay horumarisaa xakamaynta tayada, waxay dejisaa arrimaha tayada meesha ugu horeysa, waxay yaraynaysaa qiimaha tayada, waxay ogaataa koontarool wax ku ool ah, iyo muunado alaab-qeybiyeyaasha ka qaybqaata sahayda Qiimee oo bixi fikrado la doortay .
PQE (Injineer Tayada Alaabta)
Marka loo eego shuruudaha mashruuca, PQE waxay qabataa dib u eegista xogta cilmi baarista iyo horumarinta alaabada cusub waxayna bixisaa warbixinta PFMEA.Waxa kale oo ay mas'uul ka tahay kormeerka iyo falanqaynta PQC (xakamaynta tayada habka), FQC (xakamaynta tayada alaabta ee la dhammeeyey), OQC (xakamaynta tayada bixisa) iyo hababka kale, tilmaamaya daldaloolada iyo maaraynta waqtigeeda.
CQE (Injineer Tayada macaamiisha)
CQE ayaa mas'uul ka ah iibka alaabta kadib.Had iyo jeer waanu garab istaagi doonaa macaamiisheena, si joogto ah ayaanu ula socon doonaa ugana warbixin doonaa, falanqayn doonaa mabaadi'da tayada wax soo saarka, samayn doonaa heerar macquul ah iyo hababka tirada, iyo siin doonaa ka hortag iyo tallaabooyin hagaajin.